भीम रावललाई अर्को चिठ्ठा, ओलीले दिए यति ठूलो जिम्मेवारी — Imandarmedia.com
भीम रावललाई अर्को चिठ्ठा, ओलीले दिए यति ठूलो जिम्मेवारी
काठमाडौ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावललाई अर्को चिठ्ठा परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई धोका दिएर एमालेमै बसेका रावललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले ठूलो अवसर दिएका छन्।
नेकपा एमालेले पार्टी विभाजनपछि रिक्त ५५ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन गर्दा तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल खेमाका नेताहरूमध्येबाटै गर्ने भएको छ। २ जेठ २०७५ अघि एमालेको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये ५५ जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि रित्त ठाउँमा मनोनित गर्न लागिएको हो।
रिक्त पदपूर्ति गर्दा तत्कालीन नेपाल खेमाको विचार समूहमा रहेका तर हाल एमालेतर्फ खुलेका नेताहरूमध्येबाटै चयन गरिने एमालेले जनाएको छ। रिक्त ५५ जना केन्द्रीय सदस्यको सिफारिस भने नेपाल समूह छोडेर अन्तिम समयमा एमालेमा समाहित भएका १० स्थायी कमिटी सदस्यले गर्नेछन्। ५५ सदस्य सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी भने उपाध्यक्ष भीम रावल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पाएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विगतमा नेपाल समूहमा आवद्ध भएका तर हाल एमालेतर्फ खुलेका मध्येबाटै रिक्त पदपूर्ति गर्ने भन्दै रावल र पाण्डेलाई सदस्य सिफारिसको जिम्मा दिनुभएको हो। एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार रिक्त सदस्य र १० बुँदे सहमति अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिने १० प्रतिशत सदस्यको टुंगो विधान अधिवेशन अघि नै लगाइने तयारी छ।
उनका अनुसार विधान अधिवेशन अघि पार्टी छाडेका ५५ जना र मनोनयनमा पर्ने २० जना गरी ७५ जनालाई विधान अधिवेशन अगावै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने तयारी छ। ‘साथीहरू कसलाई केन्द्रमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफलमा हुनुहुन्छ चाँडै केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउँछ,’ तामाङले भने।
एमाले विभाजन भएसँगै दुबै पार्टीका नेताहरू एकले अर्को पार्टीका नेता तानेर केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। नेकपा (एस) ले पनि चाँडै केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने भन्दै सम्भव भएसम्म एमालेमा आवद्ध नेताहरूलाई तानेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने प्रयास थालेको छ। एमालेले पनि केन्द्रीय सदस्य नभएका तर पार्टीभित्र राम्रो प्रभाव राख्ने तर हाल नेकपा (एस) मा खुलेका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यको अफर गरिरहेको छ।
नेकपा (एस) का नेता बेदुराम भुसाल केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय भेलाबाट पूर्णता पाउने बताउँदै अधिकांश एमालेका नेताहरू भेलाबाट आफ्नो पार्टीमा समाहित हुने दाबी गर्नुहुन्छ। ‘एमालेका धेरै साथीहरू हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू केन्द्रीय कमिटीमा अटाउने ‘हेभीवेट’का हुनुहुन्छ,’ भुसालले भने।
इण्डीया विरुद्ध मैदानमै उत्रियो एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले इण्डीया विरुद्ध मैदानमा उत्रिएको छ । दार्चुला घटनामा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेको भन्दै तत्काल सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउने माग गरेको छ ।
एमालेले दार्जुलाका जयसिंह धामीको ज्यान गएको महिना दिन वितिसम्दा पनि देउवा सरकारले खुट्टा कमाएर बसेको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । छानविन समितीले प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको अवस्थामा सरकारले आटलाट गर्ने र टार्ने पारा ल्याए पछि एमाले एक्सनमै उत्रिएको छ ।
विज्ञप्तीनै जारी गरेर एमालले तत्काल ठोस कदम चाल्नका लागी सरकारलाई चेतावनी नै दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीले तुइन चुँडाइदिएर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउने कुरामा सरकारले लाचारी देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
एमाले प्रवक्रा प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक बेपत्ता पारिएको यति संवेदनशील घटनाका सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग जानकारी लिने, सोधपुछ गर्ने र आपत्ति जनाउने सामान्य औपचारिकता र कूटनीतिक पहलसमेत गर्न नसेको आरोप लगाएका छन्।
‘आफ्ना नागरिक बेपत्ता पारिएको यति संवेदनशील घटनाका सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग जानकारी लिने, सोधपुछ गर्ने र आपत्ति जनाउने सामान्य औपचारिकता र कूटनीतिक पहल गर्न नसक्ने सरकारले नेपाली जनताको ध्यान यस घटनाबाट अन्यत्रै मोड्न खोजेको आशंका पैदा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले प्रदर्शन गरेको संवेदनहीनता र लाचारीप्रति खेद व्यक्त गर्दै नेकपा (एमाले) यस अविलम्ब घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ ।’
धामी नदीमा बेपत्ता भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि सरकार यो घटनालाई थापथुम पार्न लागेको आरोप एमालेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा छानविन गर्न गठित समितिको म्याद पटक९पटक थपेर निकै ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाइए पनि प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको र सरकार यस घटनालाई थामथुम गर्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ।’
दार्चुला घटनाको प्रतिवेदनमा कसरी लाग्यो कैंची ?
दार्चुला घटनाबारे स्थलगत अध्ययन सकेर फर्किंदा सरकारी छानविन टोलीको निष्कर्ष थियो, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन चुँडाएका कारण जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर वेपत्ता भएका हुन् ।’
तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एसएसबीको भूमिका किटान गरिएको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार समितिको प्रतिवेदनमा ‘एसएसबीको जवानको उपस्थितिमा घटना भएको’ मात्र भनिएको छ ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनमा कसरी लाग्यो त कैंची ? स्रोतका अनुसार मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउन अघि छानविन समितिका संयोजक सहसचिव जनार्दन गौतमले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटका थिए । ‘त्यसपछि एसएसबीको संलग्नता उल्लेखसहितका केही विषयमा कैंची लागेको हो’ गृह मन्त्रालय स्रोत दाबी गर्छ ।
स्रोतका अनुसार त्यो भेटमा एसएसबीको संलग्नता उल्लेख गर्ने आधारबाट खोजी भएको थियो । छानविन समितिले वयान लिएका सम्पूर्ण प्रत्यक्षदर्शीले एसएसबीका जवानले तुइनको तार फुस्काएपछि धामी महाकाली नदीमा खसेको बताएका थिए । तुइनको तार नफुस्काउन आग्रह गरेपनि बेवास्ता गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
जयसिंहभन्दा अघि महाकाली तरेका चार जनाले पनि एसएसबीले तुइनको तार फुस्काएको वयान दिएका थिए । तर छानविन समितिले एसएसबीले काटेको भनिएको तुइन भेट्टाउन नसकेको एक सदस्यले बताए । भन्छन्, ‘तुइन भेट्टाएको भए ‘मार्क’को आधारमा काटेको हो या के हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो, तर स्थानीयले तारलाई फ्याँकिदिएछन् ।’
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लगायतका अधिकारीले नेपाली पक्षको वयानलाई मात्र आधार बनाएर प्रतिवेदनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको भूमिका किटान गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राखे । त्यही कारण ‘एसएसबीको जवानको उपस्थिति’ घटनामा भएको भनिएको गृह स्रोतले बतायो ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनबारे गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘समितिले उक्त घटना भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटेको देखिएकाले निजहरुको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कानूनी कारबाही गर्न भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न सिफारिस गरेको छ ।’
उनका अनुसार धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्नुका साथै आश्रति परिवारलाई सरकारका तर्फबाट पालन पोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्थापन गर्न पनि छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
समितिका एक सदस्यले भने प्रत्यक्षरुपमा एसएसबीको संलग्नताबारे बुझिने भाषामा बोलिएको दाबी गर्छन् । ‘अनुसन्धान गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भनेकै उनीहरुको संलग्नता भएकाले हो’ उनले भने ।
१५ साउनमा जयसिंह धामी भारततर्फ जान तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीहरुले एसएसबीका जवानले तुइनको तार काटेकै कारण उनी नदीमा खसेको बताएपछि सरकारले घटनाको अनुसन्धान गर्न १७ साउनमा १० दिनको समय दिएर छानविन समिति बनाएको थियो ।
समितिले स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै प्रत्यक्षदर्शीसँग बयान लिएको थियो। तर पटकपटक म्याद थपेको भन्दै आलोचना भएपछि छानविन समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, हेर्न बाँकी छ।